Mhlawumbi, ilizwi malunga ne-mimosa ebulalayo iyaziwa kuwo wonke umntu. Iyakuthinta nje amandla okwenza amaqabunga e-mimosa ngexesha elinye ukunyusa ebusuku, kwaye kunye nayiphi na impembelelo. Emva koko amaqabunga abuyele endaweni yawo yangaphambili. Kwiplanethi yethu kukho malunga nesiqingatha seenkulungwane zeemimosa. Zifumaneka kakhulu kwiindawo ezitshizi zaseMelika. Bamelelwa ngotshani, utshani, imithi.
Igama lalo linikezelwa kwi-genus of mimosa ukusuka kwi-root root mimos, oko kukuthi, "umdlali" okanye "imime". Igama libonisa ubuchule obunomdla obumnandi bokuba "mdlalo". Kodwa ndimele ndithi kuphela iindidi ze-mimosa zibonisa ukuphendula okunjalo, umzekelo, umgca wesandla. Enyanisweni, phakathi kwezi ntlobo yiyintanda ethandwa ngabantu abaninzi "abashisa" mimosa.
Kulo gumbi lingahlonywa njengomhlambi wonyaka. Ekhaya, i-mimosa yintlambo yehlathi. Iiflethi ezine-mimosa zibini ezibiniweyo-ngokukhawuleza. Ziqukethe amaqabunga amaninzi anamafutha. Izimbali ze-mimosa tubular, i-pink-violet. Ziqokelelwa kwisihlwele se-capitate inflorescences. Lezo ntyatyambo esiye zisetyenziselwa zona, kwaye zivela kwiintanethi zokuthenga ezantsi kwieholide entwasahlobo, kunye ne-yellow fluffy inflorescences, nangona kuthiwa yi-mimosa, kodwa empeleni i-Silver Acacia (okanye i-Acacia dealbata).
Njengoko sele kuphawuliwe, i-mimosa inekhono elimangalisayo lokuthabatha amaphephancwadi kwi-touch encinci kubo. Kungenxa yokobuchule obunomdla ukuba zonke iifama zezityalo zibona ukuba kuyimfuneko ukukhula kwesi sityalo. Ukususela apho, kwiifama ze-botanical, igadi, izityalo zokugcina izityalo, i-mimosa kunye nathi nakwiifestile.
Kwiindawo ezifudumele zeplanethi yethu, i-mimosa ithathwa njengesityalo sokhula. Ngokusemgangathweni, i-mimosa ingahlwayelwa ngoMeyi kwintsimi, kodwa ixesha kufuneka likhethwe xa kungekho ziqhwala kulindeleke. Ukuba isityalo sinakekelwa kakuhle, sinokunika imbewu eninzi. Inceda ukugcina inkcubeko iminyaka emininzi.
Ijubane apho isityalo se-mimosa siphendukela kwi-stimuli sincike kakhulu kwiqondo lokushisa. Ukuba umoya upholile, amaqabunga ayenzi ngokukhawuleza ngokukhawuleza. Ukuba isityalo sele sikhulile, amaqabunga ayo abuye aphendule ngokukhawuleza xa kuthelekiswa nesityalo esitsha.
Endle, i-mimosa ingafikelela ubude bemitha engama-1, kwaye le yimizuzu eyodwa kuphela yezilwanyana. Kulo gumbi, i-mimosa iyancinci ikhula ngaphezu kwesiqingatha semitha.
I-Inflorescences ye-mimosa ifana neebhola ebomvu. Zifumaneka kwixesha elide, ngaphandle kwamaqabunga, i-peduncles, peduncles. Iinyanga emva kwe-3 okanye 4, emva kokuba imbewu ihlwayelwe, i-inflorescences yokuqala ibonakala. Xa iintyatyambo ziyaqhakaza, ezinye zazo zenza iimbotyi zemilo eboyiweyo.
IMimosa: indawo yokuhlala
I-Mimosa yindawo yokutshala indlu ethanda ukukhanya, kodwa kufuneka ichithekele. Ukuba akukho ukukhanya okwaneleyo, amahlumela atyula. Ukuba isityalo sifumana ukukhanya okuthe ngqo, amaqabunga anokuthi aphendule okomhlaza kunye ne-curl. Umoya owomileyo ungathintela isityalo, ngoko ibhodlela kunye ne-mimosa kufuneka ifakwe kwikhetshi elimanzi, elimele lihlanjwe ngokukhawuleza. Amatye angathatha indawo, umzekelo, ngodongwe olwandisiweyo. Ebusika, imimosa ayikwazi ukugcinwa ngamabhethri, ii-radiators kunye nezixhobo zokufudumeza. I-Mimosa ivakalelwa kakhulu kwiindawo zokuhlambela, apho umoya unomoya ophezulu.
UMimosa isityalo esithanda ukushisa kakhulu. Ikhula kakuhle kwiqondo lokushisa lama-degrees ama-25. Iiflethi ziyeka ukuphendula ekuthinteni, ukuba izinga lokushisa lihla ukuya kwii-degrees ezingama-18. Ngethuba lasebusika, imimosa kufuneka ikhuselwe kwimida. Umhlaba wesityalo kufuneka ukhululeke, uhluthe kakuhle, ucebile. Ngaphantsi kwebhodi kufuneka ibe ngumjelo ophethwe kakuhle. Ngaphakathi, esi sityalo sangaphakathi singakhula kuphela njengesityalo sonyaka, kuba njengoko ixesha lidlulayo, lilahlekelwa ngumtsalane kunye nokuhlobisa.
I-Mimosa: ukuchumisa, ukunisela
I-substrate kwisibindi se-mimosa kufuneka ibe yinyameko yonke ixesha, kodwa akufanele ibe ngamanzi. Ukuba umhlaba umile, amaqabunga aya kuwa. Ngenxa yomoya omile kakhulu, ukukhula kwe-mimosa kuyancipha, ngoko kuyimfuneko, njengoko besithi, zonke iinyaniso zokwandisa umthunzi ojikeleze isityalo.
Yondla imimosa rhoqo kwiiveki ezintathu. Ngenxa yale njongo, isisombululo sesichumisi samaminerali esifanelekileyo. Phezu komgca we-substrate, unako ukuthulula i-mullein encane.
Mimosa: ukufakelwa kwendawo
Ezi zityalo ezikhulile ukusuka kwiimbewu kufuneka zitshintshelwe kwiipateni ezibanzi, ububanzi bayo bube malunga no-16 cm, kwaye izityalo endala akufanele zitshalwe.
Ngaphambi kokuba kuhlwayelwe, imbewu ihlala ibanjelwe emanzini abandayo iintsuku ezimbalwa. Zihluma ngokukhawuleza ukuba umphezulu uhamba ngokukhawuleza. Ulusu lwabo lukhuni, ngoko imbewu ayinakonakaliswa. Imbewu, njengomthetho, ihlwayelwa kwiintsuku zokugqibela zikaFebruwari okanye ngo-Matshi wokuqala. Umxube kufuneka ube ne-peat nesihlabathi, okanye ungasebenzisa umhlaba othengiweyo. Ikhonkco kunye nembewu ifakwa kwishushu. Kumelwe ufumane ukukhanya, ngaphandle koko amahlumela aya kwandula aze athathaka. Ukuba izityalo zibonakala zininzi, zimele zikhuliswe ngaphandle. Xa bakha amaqabunga okuqala, kufuneka batyalwe kwiiphothi. Amahlumela awudingi ukunyathela. Ukuze ukwandise umswakama we-atmospheric air for shots, kuyimfuneko ukugubungela isitsha kunye nabo okokuqala ngqa nefilimu.
Ngoko, ngokuveliswa ngeentlobo zembewu, izigaba ezithile ziyaziwa:
Nciphisa imbewu emanzini afudumele kwaye uzuze iintsuku ezimbalwa.
Ukukhangela isikhumba nge-emery yokuhluma kangcono.
Ukuzalisa i-tray ngomxube wehlabathi kunye ne-peat kunye nokuphahlaka kwe "imibhede" - iiprooves nganye ngamasentimitha amahlanu.
Ukutshala imbewu kwiindawo zokuhlala (umgama malunga no-5 cm).
Ukutshiza umgangatho we-substrate yodongwe kunye nembewu etsalwe.
Gubungela i-tray ngefilimu uze uyibeke kwindawo efudumeleyo kwaye idityanisiweyo.
Mimosa: ubunzima bokukhula
Ngenxa yomhlaba owomileyo, amaqabunga angenakuvulwa ngexesha lemini, ukwenzela ukuba ukuthambisa kulungiswe.
Ngenxa yokutyiliswa okungaqhelekanga, amaqabunga anokuphela kwaye awele. Kwakhona, imbangela yale nto ingabomileyo. Kubalulekile ukugcina umgangatho wokuhlala umswakama womhlaba nokukhusela ukuba ungomileyo.
Ngenxa yokungabikho kwesondlo ehlabathini, ukukhanya okungahambi kakuhle kunye ne-cold mimosa kunokusasaqhambela ixesha elide. Isityalo kufuneka sondliwe kwaye senze izimo zokuphila ezifanelekileyo.
Isityalo sinokuhlasela isicangca, ngenxa yamaphi amaqabunga aqala ukukhawuleza aze ajikeleze. Kubalulekile ukunyanga i-mimosa nge-acaripid kunye nokutshabalalisa izinto ezonakalisiweyo zesityalo.
Isityalo sinokuhlasela izikhumba ze-aphids, ngenxa yokuba iziqu ze-mimosa ziyakunqanda. Izinambuzane kufuneka zihlanjwe kwi sityalo ngamanzi okanye ziphathwe ngokulungiswa kwamakhemikhali.
Izimbali zaseBraperone kunye noJacobinia: indlela yokukhula kakuhle
Indlela yokukhulisa i-strawberries engadini?
Izityalo ezingaphakathi: ipolisi yokuhlobisa
Indlu yezindlu ayr
Izityalo ezingaphakathi: imon
Ubulumko bokukhula bulibala-and-nots
Tortellini kwi-sauce eluhlaza
I-Horoscope ngoDisemba 2017 - ibhinqa-i-Libra - ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
Indlela yokunyamekela umenzi wekhofi
Umdlali ongumdumi waseTigran Keosayan
Isobho seCold cream esivela kwizambatho kunye ne-zucchini
I-Cheesecake ngamama kunye nama-cherry omisiwe
IJam kwi-dogrose (Kiev)
Ummeli we-Ukraine uTatyana Piskareva
Indlela yokuchonga umsebenzi wesondo weqabane lakhe ngendlela yokutya?
Ukwakha izakhiwo zomzimba
Ungadla njani ukuba ulahlekelwe isisindo?